VaTsvangirai Vanoshora Humbimbindoga hwaVaMugabe
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti havasi kufara zvikuru nekushaya ruvimbo kwavava kuita kumutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vavati havasi kuremekedza mitemo yenyika uye chibvumirano chakaumba hurumende yemubatanidzwa.
VaTsvangirai vati vakazvipira kushanda naVaMugabe, avo vavakakunda musarudzo dzemuna Kurume 2008, senzira yekubatsira VaMugabe kuti vagadzirise chimiro chavo, icho change chave chisekeso pasi rose. Asi VaTsvangirai vati VaMugabe vari kuratidza kuti havagoni kushanda zvakanaka navamwe.
VaTsvangirai vatiwo bato ravo reMDC ratora danho rekuchengetedza bumbiro remitemo yenyika, kuburikidza nekuona kuti VaMugabe havafanirwe kuramba vachiita madiro ajojina vachityora mitemo yenyika.
VaTsvangirai vati VaMugabe vakatyora mutemo apo vakadoma gavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, vasina kugara pasi nevamwe vavo muhurumende.
VaTsvangirai vatiwo vakatsamwiswa zvakare naVaMugabe apo vakadoma magavhuna matsva ematunhu gumi munyika vasina zvakare kugara pasi nevamwe vavo. Vatiwo VaMugabe vakadoma vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vasina kutevedza zvinodiwa nechibvumirano cheGlobal Political Agreement, GPA. Vati sezvo vari mutungamiri wehurumende, vachaudza nyika dzine vamiriri veZimbabwe vakadomwa naVaMugabe kuti dzisatambire vamiriri ava. Vati zvakare SADC inofanirwa kupindira munyaya iyi nechimbi chimbi sezvo VaMugabe vari kutyora mitemo yenyika.
Mutungamiri wehurumende atiwo nyaya yekuti vamwe vanoti ndivo chete vane masimba ekutonga nyika, inofanirwa kuraswa nekuti vatongi venyika vanopihwa masaimba aya nevanhu vakavasarudza.
Kunyange hazvo bato reMDC riri kushoropodza zvakasimba chirongwa chekunyorwa kwebumbrio idzva remitemo yenyika, nhengo dzaro dziri mu Copac dzinoti pari zvinho hurongwa uhu huchiri kuenderera mberi.